အတွေးအမြင် – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
ပိုက်ဆံ​ လိုက်​​တောင်း​နေတဲ့ သူ​တောင်းစား..​တွေနဲ့..ပက်​သက်​ပြီး ကိုယ်​​တွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့.အဖြစ်​အပျက်​​လေးကို မျှ​ဝေချင်​ပါတယ်​။
လွန်​ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်​​ကျော်​​လောက်​က..မန္တ​လေးမြို့အတွင်းမှာ လိုက်​လံ​တောင်းစား​နေတဲ့..က​လေး လူကြီး​တော်​​တော်​များများကို ​တွေ့ဆုံပြီး..သူတို့အတွက်​အလုပ်​ရရှိ​ရေး..စားဝတ်​​နေမှု၊ အ​ဆင်​​ပြေ​ရေး..တို့အတွက်​ ​ဂျေ​ဂျေ.နဲ့. ဂျေ​ဂျေ.ရဲ့ ဆရာ​တွေ စု​ပေါင်းပြီး.သု​တောင်းစား တော်​​တော်​များများနဲ့ ..​တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်​။ Continue reading “မန္တလေးမြို့က တောင်းရမ်းစားသောက်သူ အများစုရဲ့ တကယ့်ဘဝအမှန်”
Posted in လူမှုဘဝ, အတွေးအမြင်LeaveaComment on မန္တလေးမြို့က တောင်းရမ်းစားသောက်သူ အများစုရဲ့ တကယ့်ဘဝအမှန်
Posted on December 17, 2018 by moezaw
မိန်းမ ဆိုတာ မျိုးက ဘယ်​ဖက်​ကပဲ ကျကျ ​ပေါက်​တတ်​တဲ့ ဖက်​ရွက်​ မျိုးနဲ့ တူကြပါတယ်​
ဆင်​ခြင်​​နေထိုင်​သင့်တာက ​ယောကျာ်း​ယော မိန်းမ​ရောပဲ
ဒါ​ပေမယ့် မိန်းမ​တွေ ပိုပြီး ဆင်​ခြင်​ ​နေထိုင်​သင့်တယ်​
ရှင်​တို့​ ​​ယောကျာ်း​တွေ​ရော မဆင်​ခြင်​သင့် ဘူးလား ​မေးချင်​​မေးမယ်​
​ယောကျာ်း​လေး တယောက်​ ​ဘောင်းဖီတိုဝတ်​ လူကြားထဲသွား​နေတာ ကြည့်​ကောင်​တယ်​
​ယောကျာ်း​လေးတယောက်​ ပုဆိုး အတို ဝတ်​ပြီး သွား​နေတာ ကြည့်​ကောင်းတယ်​
အဲ့ဒီ ​ယောကျာ်းကို ​ပေါင်​​ပေါ် ဒူး​ပေါ်​နေထိုင်​တာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်​သူကမှ စိတ်​မရွဘူး ​ရယူလိုစိတ်​ တဏှာ တတ်​မက်​စိတ်​ ​ပေါ်မှာမဟုတ်​ဘူး
မိန်းမတယောက်​ အဲ့ဒီလို ဝတ်​စားလာ ကြည့်ပါလား
” ဟာ …. ဟို​ကောင်​မ​တေ့ာ ဆွဲချင်​စရာပဲကွာ ​ပေါင်​​လေး​တွေက ဖြူစွပ်​​နေတာပဲ ” လို့ မြင်​တဲ့ ​ယောကျာ်းတိုင်း ​ပြောကြမှာပဲ
အန္တရယ်​ ကို ဖိတ်​​ခေါ်သလို ဖြစ်​​နေ​တော့ ​ရှင်​တို့​ယောကျာ်း​တွေက တနာရူးလို့ နာထလို့ မိန်းက​လေး​တွေ ဘဝပျက်​ရတာ ဆိုပြီး ​ပြောလို့ မရပါဘူး
ဘယ်​​ကျားမျိုးမဆို သား​ကောင်​မြင်​ရင်​ စားချင်​စိတ် ​​ပေါ်မှာပဲ
တကယ်​​တော့ အစ်​မ​လေးတို့ ညီမ​လေးတို့ ဝတ်​စားဆင်​ပြင်​မှု ​နေထိုင်​မှု​တွေကို ဆင်​ခြင်​သင့်တာပါ
ကိုယ်​မှာပါလာတဲ့ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ကို ကိုယ်​တိုင်​​တောင်​ လုံ​အောင်​ မဝှက်​ထားနိုင်​ရင်​
တခြားသူ ခိုးယူခံရတာ အပြစ်​​ပြောလို့မှ မရတာ ကိုယ်​အသုံးမကျလို ကိုယ်​မထိန်းသိမ်း တတ်​လို့ ကိုယ်​ညံ့လို ဆိုတာ ပါပဲ
တိုင်းတပါးနဲ့ မယှဉ်​ပြိုင်​ပါနဲ့ အဲ့ဒါက သူတိုနိုင်​ငံ သူတို့ ဓ​လေ့ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာ​လေ ​ယောကျာ်းတိုင်း ရိုးအိ​နေတဲ့ ထုံးစံ​ပေါ့
အစ်​မကို ယူထားတဲ ​ခေးအို ​ရှေ့မှာ မသင့်​​တော်​တဲ့ အ​နေထိုင်​တာမျိုး
​ဖောက်​ပြန်​မှာ​ပေါ့ မြူ​ဆွေသလို ဖြစ်​​နေတာကို
တ​​ရက်​မဟုတ်​ နှစ်​ရက်​မဟုတ်​ ဝတ်​လာလိုက်​တဲ့ အတိုအပြတ်​​တွေ
ဟိုကလူက ​ခဲအို ဆိုပယ်​မဲ့ ​ယောကျာ်း​လေ စိတ်​မထိန်းနိုင်​​တော့ ကျူးလွန်​​ရော မုဒိမ်းမှု
ကဲ့ ဘယ်​သူပို နစ်​နာသွားလည်း မိန်းက​လေးပဲ နှစ်​နာရတာပါ
အ​နေအထိုင် ​ဆင်​ခြင်​ပါ မိန်း​မ​တွေရဲ့ အိန္ဒြရယ်​ နဲ့ အညီ
​ပြောဆိုဆက်​ဆံပါ ယဉ်​​ကျေး လိမ္မာတဲ့ အမှုအရာဖြင့်
ဘယ်​ဖက်​က ကျကျ ​ပေါက်​တတ်​တဲ့ ဖက်​မျိုး အဖြစ်​မခံပါနဲ့
အတုမှား ​တွေကို အတုမယူ ပါနဲ့ ​
​ခေတ်​နဲ့ ​လျော်​ညီစွာ ​ဝတ်​ဆင်​ပါ ​နေထိုင်​ပါ
အဖိုးထိုက်​တဲ့ ပန်း တစ်​ပွင့် ဖြစ်​နိုင်​ကြပါ​စေ
မိနျးမ ဆိုတာ မြိုးက ဘယျဖကျကပဲ ကကြ ပေါကျတတျတဲ့ ဖကျရှကျ မြိုးနဲ့ တူကွပါတယျ
ဆငျခွငျနထေိုငျသငျ့တာက ယောကျြားယော မိနျးမရောပဲ
ဒါပမေယျ့ မိနျးမတှေ ပိုပွီး ဆငျခွငျ နထေိုငျသငျ့တယျ
ရှငျတို့ ယောကျြားတှရေော မဆငျခွငျသငျ့ ဘူးလား မေးခငျြမေးမယျ
ယောကျြားလေး တယောကျ ဘောငျးဖီတိုဝတျ လူကွားထဲသှားနတော ကွညျ့ကောငျတယျ
ယောကျြားလေးတယောကျ ပုဆိုး အတို ဝတျပွီး သှားနတော ကွညျ့ကောငျးတယျ
အဲ့ဒီ ယောကျြားကို ပေါငျပျေါ ဒူးပျေါနထေိုငျတာကို ကွညျ့ပွီး ဘယျသူကမှ စိတျမရှဘူး ရယူလိုစိတျ တဏှာ တတျမကျစိတျ ပျေါမှာမဟုတျဘူး
မိနျးမတယောကျ အဲ့ဒီလို ဝတျစားလာ ကွညျ့ပါလား
” ဟာ …. ဟိုကောငျမတေ့ာ ဆှဲခငျြစရာပဲကှာ ပေါငျလေးတှကေ ဖွူစှပျနတောပဲ ” လို့ မွငျတဲ့ ယောကျြားတိုငျး ပွောကွမှာပဲ
အန်တရယျ ကို ဖိတျချေါသလို ဖွဈနတေော့ ရှငျတို့ယောကျြားတှကေ တနာရူးလို့ နာထလို့ မိနျးကလေးတှေ ဘဝပကျြရတာ ဆိုပွီး ပွောလို့ မရပါဘူး
ဘယျကြားမြိုးမဆို သားကောငျမွငျရငျ စားခငျြစိတျ ပျေါမှာပဲ
တကယျတော့ အဈမလေးတို့ ညီမလေးတို့ ဝတျစားဆငျပွငျမှု နထေိုငျမှုတှကေို ဆငျခွငျသငျ့တာပါ
ကိုယျမှာပါလာတဲ့ ပစ်စညျး ဥစ်စာ ကို ကိုယျတိုငျတောငျ လုံအောငျ မဝှကျထားနိုငျရငျ
တခွားသူ ခိုးယူခံရတာ အပွဈပွောလို့မှ မရတာ ကိုယျအသုံးမကလြို ကိုယျမထိနျးသိမျး တတျလို့ ကိုယျညံ့လို ဆိုတာ ပါပဲ
တိုငျးတပါးနဲ့ မယှဉျပွိုငျပါနဲ့ အဲ့ဒါက သူတိုနိုငျငံ သူတို့ ဓလေ့ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာလေ ယောကျြားတိုငျး ရိုးအိနတေဲ့ ထုံးစံပေါ့
အဈမကို ယူထားတဲ ခေးအို ရှမှေ့ာ မသငျ့တျောတဲ့ အနထေိုငျတာမြိုး
ဖောကျပွနျမှာပေါ့ မွူဆှသေလို ဖွဈနတောကို
တရကျမဟုတျ နှဈရကျမဟုတျ ဝတျလာလိုကျတဲ့ အတိုအပွတျတှေ
ဟိုကလူက ခဲအို ဆိုပယျမဲ့ ယောကျြားလေ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ ကြူးလှနျရော မုဒိမျးမှု
ကဲ့ ဘယျသူပို နဈနာသှားလညျး မိနျးကလေးပဲ နှဈနာရတာပါ
အနအေထိုငျ ဆငျခွငျပါ မိနျးမတှရေဲ့ အိန်ဒွရယျ နဲ့ အညီ
ပွောဆိုဆကျဆံပါ ယဉျကြေး လိမ်မာတဲ့ အမှုအရာဖွငျ့
ဘယျဖကျက ကကြ ပေါကျတတျတဲ့ ဖကျမြိုး အဖွဈမခံပါနဲ့
အတုမှား တှကေို အတုမယူ ပါနဲ့
ခတျေနဲ့ လြျောညီစှာ ဝတျဆငျပါ နထေိုငျပါ
အဖိုးထိုကျတဲ့ ပနျး တဈပှငျ့ ဖွဈနိုငျကွပါစေ
Posted in အတွေးအမြင်LeaveaComment on မိန်းခလေးတိုင်း ဖတ်​ရန်​
Posted on December 16, 2018 December 16, 2018 by moezaw
တစ်လောကပင် သူနှင့် ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ ခဲ့သေးသည်။ သည်တုန်းက သူသည် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ တက်တက်ကြွကြွ၊ သူ့ မှာ ညှိုးငယ်နေသည့် သဏ္ဍာန် အလျဉ်းမရှိ၊ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ပြန်ဆုံသည့် အထိမ်းအမှတ် ယမကာဝိုင်းသို့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ရသေးသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့ ဖန်ခွက်ထဲမှ အချိုရည်တွေကို ကြည့်ကာ သူကပင် ရယ်ပွဲဖွဲ့ လိုက်သေးသည်။
“ဟား-ဟား၊ ငါ့သူငယ်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ”သူက အရက်ခွက်ကို မော့ချရင်းမှ ကျွန်တော့်ကို ပြောနေသည်။ ကျွန်တော့မှာ သူတို့ ကြားထဲတွင် သင်းကွဲငှက် တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေသည်။ ကြာတော့ သူ အားနာလာပုံရသည်။ ကျွန်တော် တည်းခိုရာ နေရာအရောက် သူအသံတွေ လေးတွဲ့ နေလေပြီ။
“ငါတို့ဝိုင်းထဲမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်း အချိုရည်သမားဖြစ်နေတော့ မင်းအနေရခက်နေမှာပဲ၊ ငါ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆွဲလိုက်ဦးမယ်ကွာ၊ ကျောင်းပြီးကတည်းက မဆုံဖြစ်တော့တာ၊ အခုဆုံတုန်းလေး လုပ်လိုက်ဦးမယ်”ကျွန်တော်က အလိုက်သင့်နေပေးသော်လည်း သူတို့ အနေဖြင့် ကျွန်တော့်အပေါ် ဆက်ဆံရခက်နေပုံရသည်။ ကျွန်တော့်အပေါ် ပြောစရာစကားလည်းမရှိ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူတို့ အပေါ် ပြန်ပြောစရာအကြောင်းလည်း မရှိလှပေ။ သူတို့ ၏ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ကိစ္စများတွင် ကျွန်တော်ကလည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့။ သည်တော့ ကျွန်တော့်မှာ လူပိုလို ဖြစ်နေသည်။ သို့ နှင့် ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ပြန်ပို့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သည်တုန်းက ရွှင်မြူးတက်ကြွနေသော သူ့ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ကျွန်တော့်မျက်စိထဲ စွဲထင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တစ်လလောက်ကြာတော့ သူ့ အသံကို တယ်လီဖုန်းခွက်ထဲမှတစ်ဆင့် ကြားလိုက်ရသည်။ ဖုန်းခွက်ထဲတွင် သူ့ အသံတွေ မှိန်ဖျော့နေသည်ကို ကျွန်တော် သတိထားမိသည်။ ထိုအသံမှတစ်ဆင့် ဖုန်းပြောနေသည့် သူ့ ရုပ်သွင်ကို မှန်းဆပုံဖော်ကြည့်မိသည်။ ဘယ်လောက်များ ညှိုးလျော့နေမည်လဲ။ သူ့ အသံခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးတွင် လှိုင်းအနိမ့်အမြင့် မရှိတော့။ တကယ့် တန်းတန်းကြီး၊ သူ့ အသံက အေးစက်သော်လည်း သူ့ ရင်ထဲတွင် အဘယ်မျှ ပူလောင်ပြင်းထန်နေမည်ကို ကျွန်တော် ရိပ်မိနေသည်။ သူ့ စိတ်တွေကော ဘယ်လောက်ဗြောင်းဆန် နေသလဲမသိ။ သူ့ အပူသည် တယ်လီဖုန်းကြိုးများမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ထံ ကူးစက်လာသည်ဟုပင် ထင်ရသည်။ ဟိုတုန်းက ရွှင်မြူးတက်ကြွ လန်းဆန်းနေသော အသံမျိုးနှင့် ကွားခြားလှပါဘိခြင်း။ဌာနတွင်း တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးအတွက် သူ့ ဆေးစစ်ခံရင်း ကု၍မရသော ရောဂါပိုးတစ်ခုကို သူ့ သွေးထဲမှာ စစ်ဆေးတွေ့ ရှိသွားသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် နောက်တစ်ခါ စစ်ဆေးပြန်သည်။ အဖြေမပြောင်းလဲ၊ သူတုန်လှုပ်သွားသည်။ သည်ရောဂါပိုးသည် ဘယ်တုန်းကများ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နေရာယူသွားသည်မသိ။ သူအလုပ်မှ ရုတ်တရက် အနားယူလိုက်ရသည်။ မောင်းနှင်နေသည့် စက်တစ်လုံး လည်ပတ်ကောင်းနေစဉ်မှာ ခါးပတ်ကြိုးပြတ်သွားသည်သို့ဖြုန်းခနဲ။မမျှော်လင့်ထားသော အခြေအနေတစ်ခု ရုတ်တရက်ရလာသူတိုင်း ကြောင်စီစီ ဖြစ်သွားတတ်တာအမှန်ပင်။ လက်ရှိလည်ပတ်နေသော အရှိန်အဟုန်နှင့် အကြာကြီးနေရမည်ဟု ထင်ထားတတ်ကြတာကလည်း ဓမ္မတာမဟုတ်လား။ အခြေအနေသစ်တစ်ခုသို့ရုတ်ချည်းပြောင်းလိုက်ရသောအခါ ထိုအခြေအနေသစ်အတွက် ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ ပြင်ဆင်ထားတာမရှိ၊ ထိုအခါ ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်း၏ အခြေအနေကို ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အဖြစ် ပြင်းထန်စွာခံစားရစမြဲ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းလည်း သည်လိုဖြစ်သွားပုံရသည်။ သူ့ အသံကို ခန့် မှန်းကြည့်ရုံနှင့် ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေသော သူ့ စိတ်တွေကို ကျွန်တော် အထင်းသားမြင်နေရသည်။ ကျွန်တော် သူ့ ကို အားပေးရသည်။
ဘာမှ စိတ်မပျက်ပါနဲ့သူငယ်ချင်းရာ၊ ငါတို့ ရှိပါသေးတယ်။ မင်းကို ငါလိုလေသေးမရှိ ကူညီပါ့မယ်။ စိတ်အးအေးသာထား” “စိတ်အေးအေးထားဖို့ ဆိုတာက အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တယ်ကွ၊ အခု ငါ့စိတ်ကို ဘယ်လိုအေးအောင် လုပ်ရမလဲ၊ အဲဒါကို ငါသိချင်တယ်” “ဒီလိုဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာပြောဖို့ က သိပ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းအားရင် လာခဲ့ပါလား။ ဒါမျိုးက အချိန်ယူပြီး သေချာပြောမှ နားလည်မှာ မင်းလာနိုင်မလား” “အေ-လာခဲ့မယ်ကွာ၊ ငါတော့ အခုစိတ်အေးတဲ့နည်းကလွဲလို့တခြားဘာမှ မသိချင်ဘူး။ ကဲ-ငါအခုလာခဲ့မယ်။ မင်ဆက်စောင့်နေ” သူ့ ဘက်က ဖုန်းချသွားသည်။ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ကြီးဖြစ်သည်။ သြော်-သူ့ ခမျာ အရိပ်တစ်ခုခုကို ရှာနေရသည်ကိုး။ သူ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ခိုလှုံစရာအရိပ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့သူသဘောပေါက်နားလည်သည်အထိ ကျွန်တော်ရှင်းပြရပေမည်။ သူ ကျွန်တော့်ထံသို့ကားဖြင့်လာနေစဉ်အတွင်း ကျွန်တော့်မှာ သူ့ ကို ပြောရမည့် စကားတွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းရသည်။ စာအုပ်စင်မှ စာအုပ်တွေကို ရှာရသည်။ တိတ်ခွေစင်မှ တရားတိတ်ခွေများကို ရွေးချယ်ရသည်။ လတ်တလော သူနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မည့် တရားစာအုပ် တရားတိပ်ခွေ။
ကျွန်တော်က ဆရာတော်ဦးဇောတိက (ပျဉ်းမနား)၏ တရားတိတ်ခွေတွေနှင့် အမြဲတစေ ထိတွေ့ ယဉ်ပါးနေသူဖြစ်သဖြင့် ဘယ်လို စိတ်အခြေအနေဖြစ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလျှင် ဘယ်တိပ်ခွေထဲက ဘယ်ဟောချက်နှင့် အံဝင်မည်ကိုပါ ခန့် မှန်းတတ်လာခဲ့သည်။ သို့ နှင့် အချိန်မဆိုင်းဘဲ အဖြေရသည်။ “နကုလမာတာကို ဘုရားဟောဖူးတာရှိတယ်။ တစ်ခဏလောက်များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာတယ်လို့ ပြောတဲလူဟာ အသိဥာဏ်နည်းလို့ပြောတာပါတဲ့။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ အစဉ် အမြဲပဲ သူ့ မှာ ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ရှိနေတာပဲနော်၊ သွားလာလုပ်ကိုင်လို့ဖြစ်နေသေးလို့ တာ သူ့ ကို ရောဂါလို့ လဲ နာမည် တပ်မနေတော့ဘူး။ ဆေးရုံလည်းတက်စရာမလိုဘူး။ ဆရာဝန်လည်းပြစရာ မလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် မအီမသာဖြစ်တဲ့သဘောတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ ရင်ထဲကပူသလိုလို မောသလိုလို တစ်ခါတလေ ခေါင်းထဲကမူးသလိုလို၊ ဒီလိုဟာတွေဟာ အနည်းနဲ့ အများ လူတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူတွေက ဒီလောက် မသိသေးဘူး။
စိတ်တွေက တက်ကြွတဲ့လူတွေဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း လှုပ်ရှားရတဲ့အရွယ်၊ Active ဖြစ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ သတိမပြုမိလိုပါ။ လုပ်စရာ ကိုင်စရာတွေ များနေတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင် ကိုင်ချင်တာတွေကိုပဲ သိပ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ Involve ဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်နေရတာဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မအီမသာမှုတွေကို သိပ်ပြီး အရေးမစိုက်နိုင်ကြဘူး။ မွေးခါစကတည်းက မအီမသာတဲ့သဘောက ရှိနေသေးသားပဲ။ ဒီမအီမသာဆိုတဲ့သဘော၊ မသက်မသာဆိုတဲ့သဘောကိုပဲ Disease လို့ခေါ်တာပါ။ ရောဂါအမည် မတပ်သေးလို့ သာ။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲက မအီမသာသဘောကို အမြဲတမ်းလိုလိုပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေလို့ သာ နည်းနည်းလေး နေသာတာပါ”
ထိုစကားအပေါ် အခြေခံ၍ သူ့ ကို ကျွန်တော် အားပေးရပေမည်။ သူက ရောဂါတစ်ခုရှိပြီဟု ဆိုင်းဘုတ်အတပ်ခံလိုက်ရသူ။ ကျွန်တော်တို့ က ဆိုင်းဘုတ်မရှိသေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟု ဆိုကြပါစို့ ။ ဆိုင်းဘုတ်အတပ်မခံရသေးသည့် ကျွန်တော်တို့ တွင်လည်း ရောဂါဝေဒနာပေါင်းစုံ ပိုးမွှားပေါင်းစုံတို့ သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ နေရာအနှံ့ ရှိနေပေလိမ့်မည်။ သူ့ ထက်လည်း ဆိုးလျှင် ဆိုးသွားနိုင်သည်။ ဘာမှ မသေချာ။
သို့ သော် သူ့ ဆိုင်းဘုတ်က ခေတ်ပေါ်ဆိုင်းဘုတ်။ တနည်းအားဖြင့် ကုစရာဆေးမရှိသေးသည့် ရောဂါဟုဆိုသည့်အတွက် ထိုအရှိန်ကြောင့် လူတွေ ကြောက်နေကြခြင်းပါပေ။ သို့ သော် ကုစရာဆေးရှိသည့် ရောဂါများနှင့်ပင် ကွယ်လွန်သူတို့ လည်း ရှိခဲ့ကြပြီးပေပြီ။ အသေအချာ ဂရုတစိုက်ကုစားလျက်ကပင် တိမ်းပါးခဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပြီးပြီ။ လူတို့ ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ရောဂါဘယတွေကို ကုစားပေးရင်း အသက်ကယ်နေကြသည့် ဆရာဝန်တွေပင်လျှင် ထိုရောဂါဘယတွေ သူတို့ခန္ဓာထဲ နေရာယူလာသောအခါ သူတို့ အသက်ကို သူတို့မကယ်နိုင်ကြတော့။ ဘာမျှမမြဲ၊ ဘာမျှအစိုးမရ၊ သူ့ သဘောသူဆောင်လာသည့် သေခြင်းတရား၊ မရင်ဆိုင်လိုသော်လည်း ရင်ဆိုင်ရပေမည်။
ရုတ်တရက်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းသည် သေမိန့် ကျပြီးသူဟု ထင်ရပေမည်။ သေဖို့ ရက် အတိအကျ သတ်မှတ်ခံလိုက်ရသူကဲ့သို့ရှိပေမည်။ ခန့် မှန်းခြေအရ သည်ရောဂါကြောင့် သည်နှစ်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာ သေရတော့မည်ဆိုလျှင် မသေမီ ဘာလုပ်မည်နည်း။ ရသည့်အချိန်အတွင်း ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချသွားမည်နည်း။
“အဆိုးတွေကို ထိုင်တွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် စိတ်ဓာတ် အင်အားတွေကုန်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေကုန်မယ်။ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်ပြီး ညှိုးနွမ်းနေမယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သူနဲ့ တွေ့ ရရင် တခြားလူတွေပါ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်။ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဘက်ကနေ ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်နေရင် ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။ သူများအတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။ တရားအားထုတ်တဲ့သူ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခဲတယ်။ အဆိုးနဲ့ တွေ့ ရလည်း အဆိုးထဲက အကောင်းကိုရအောင် ယူတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲသတိနဲ့နေတဲ့အကျင့်ကို လုပ်နေမှာသာ ဘ၀အတွေ့ အကြုံအမျိုးမျိုး ကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုး တွေ့ ရတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်။ အကောင်းနဲ့ တွေ့ တဲ့အခါ ငါမှငါဆိုတဲ့ မာနဖြစ်မသွားဘူး။ အဆိုးနဲ့ တွေ့ ရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျ မသွားရဘူး။ ဘယ်လို လောကဓံနဲ့ တွေ့ ရတွေ့ ရ အားလုံးဟာ ရင့်ကျက်မှုကို အထောက်အကူပြုမယ်”
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို အားပေးရန် တရားစကားတွေ ရှာဖွေစုဆောင်းနေဆဲမှာပင် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကားက အိမ်ရှေ့ မှာ ဆိုက်လာသည်။ သူ့ ကို ဆရာတော်ဦးဇောတိက ဟောကြားသည့် ဗုဒ္ဓ၏ရင်ခွင်မှာ တရား တိပ်ခွေမှ အကြောင်းအရာများကို ဖောက်သည်ချရပါမည်။သူနှင့် ကျွန်တော် စကားတွေ အများကြီး ပြောရပေလိမ့်ဦးမည်။“လာသူငယ်ချင်းလာ” အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသော သူ့ ကို လှမ်းကြိုလိုက်ရသည်။ သူမျက်နှာမကောင်း၊ ခြေလှမ်းတွေက တုံ့ နှေးနှေး၊ ဘိနပ်ချွတ်နေပုံက ဆုတ်ဆိုင်းဆိုင်း။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် “ဟေ့ သူငယ်ချင်းကြီး ဘယ်လိုလဲကွာ ဘာညာ” ဟု ဆိုကာ ၀ုန်းဒိုင်း ဘိနပ်ချွတ်၊ ကမန်းကတန်း အခန်းထဲဝင်လာတတ်သော သူ့ လှုပ်ရှားမှုတွေသည် ယခုတော့…။
ဧည့်ခန်းတွင်း ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်လိုက်ပုံကလည်း အရုပ်ကြိုးပြတ်။ “ဟူး” ကနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော သက်ပြင်းကလည်း ရှည်လျားလှပါဘိ။ သူ့ ခမျာ ကျွန်တော့်ကိုလည်း မျက်နှာချင်း မဆိုင်နိုင်ပြန်။ ပြူးတင်းပေါက်မှနေ၍ ခပ်ဝေးဝေးတစ်နေရာကို ကြည့်နေသည့် သူ့ မျက်လုံးတွင် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသော အတွေးတွေ ထင်ဟပ်နေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ ကျွန်တော်ကပင် စကားစရသည်။
“ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မင်းဘယ်လောက် ခံစားရမလဲဆိုတာ ငါကိုယ်ချင်းစာပါတယ် သူငယ်ချင်း။ တကယ်တော့ ငါ့အနေနဲ့ က အားပေးရုံ နည်းလမ်း ပြောပြရုံဆိုတော့ ကာယကံရှင် မင်းလောက်တော့ မခံစားရဘူးလို့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ငါခံရမှာပါပဲ။ ဟုတ်တယ် မင်းက ကာယကံရှင်ကိုး။ ငါက ဘေးလူဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာရုံကလွဲလို့ကာယကံရှင်လောက်တော့ ခံစားချက် မပြင်းနိုင်ဘူးပေါ့ကွာ”သူဘာမျှ မပြော။ ငြိမ်နေသည်။ အဝေးတစ်နေရာကို ကြည့်နေသည်။ သူ့ မျက်လုံးတွင် ဘာကိုမျှ မမြင်မှာတော့ သေချာသည်။ သူ့ စိတ်က ကျွန်တော့်စကားကို နားထောင်နေပေလိမ့်မည်။ သို့ အတွက် မျက်လုံးကိုဖွင့်၍ ကြည့်နေသော်လည်း ဘာကိုကြည့်နေမိမှန်းသိမှာ မဟုတ်သဖြင့် သူ့ ခမျာ မြင်နေသော်လည်း သိမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်က လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ဓမ္မဒါန စာအုပ်ငယ်ကလေးကို သူ့ ထံ လှမ်းပေးလိုက်သည်။ ဆရာ ဦးဇောတိက (ပျဉ်းမနား) ဟောကြားချက်ကို ပြန်လည် ပုံနှိပ်ထားသည့် ဓမ္မဒါနစာအုပ်ကလေး။ (In the lap of the Buddha) ဗုဒ္ဓ၏ ရင်ခွင်မှာ။
သူက စာအုပ်ကလေးကို လေးလံလှသော သူ့ လက်များဖြင့် လှမ်းယူနေသည်။“ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ အိမ်ရောက်ရင် မင်းအေးအေး ဆေးဆေးဖတ်ပေါ့ကွာ၊ ဒါက တရားတိပ်ခွေ၊ ဒီထဲမှာကတော့ ဆရာတော်ဟောပြောချက် အပြည့်အစုံပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ နည်းနည်းချုံ့ ထားတာပေါ့”ကျွန်တော်တော်က ကတ်ဆက်ထားရာနေရာသို့လျှောက်သွားပြီး တိပ်ခွေကို အစမ်းသဘောဖွင့်ပြလိုက်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်က သူ့ ကို ပြောပြနေခြင်းထက် ဆရာတော်၏ အသံက သူ့ အတွက် စိတ်အေးသက်သာရာရမှုကို ပိုဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ဆရာတော်၏ အေးမြသော အသံသည် အိမ်အတွင်း၌ ဖြန့် ကျက်လွှမ်းမိုးသွားတော့သည်။“မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ ပါဠိလိုဟောခဲ့တဲ့ ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကလေးက အင်မတန်ရှင်းပါတယ်။ အင်မတန်ရိုးပါတယ် Be an island unto yourself.
ပင်လယ် သမယဒ္ဒရာ အလယ်ခေါင်မှာ ကျွန်းလေးရှိတယ်။
ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာမှာလည်း မုန်တိုင်းတွေထ၊ လှိုင်းကြီးတွေထ နေတယ်။ အဲဒီမှာ လူတစ်ယောက်ကလည်း မျောနေတယ် ဆိုပါတော့၊ ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းမြင်ရင် သူဘယ့်နှယ်နေမလဲ၊ အင်မတန် ၀မ်းသာမယ်၊ ဒီကျွန်းကိုသာ ငါရောက်သွားရင်တော့ ငါဒီဒုက္ခကနေ လွတ်ကင်းပြီ၊ အားကိုးရာ အားထားရာရပြီ။ ဆောက်တည်ရာရပြီ။ အဲဒီလိုဖြစ်မှာနော်၊ မိမိကိုယ်ကိုလဲ အဲဒီ လှိုင်းတံပိုးတွေထနေတဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းကလေး တစ်ကျွန်းသဖွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ယူရမှာနော်။ အလိုအလျောက်တော့ ဖြစ်မလာဘူး။ Be your own refuge…refuge ဆိုတာ အားကိုးရာ အားထားရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။ ပြီးတော့ Make the Dhamma your island တရားကို မိမိအတွက် ဆောက်တည်ရာဖြစ်တဲ့ ကျွန်းကလေးသဖွယ် ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ Make no other refuge တခြား ဘယ်အရာကိုမှ မိမိအတွက် ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာ မဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ဒီစကားတွေဟာ အင်မတန် လေးနက်တယ်နော်။ လူဆိုတာ ပြင်ပမှာပဲ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာကြတာ။ အဲဒီလို ဖြစ်အောင် မလုပ်နဲ့ ။ ဒီစကားတွေဟာ အင်မတန်လေးနက်တယ်နော်။ လူဆိုတာ ပြင်ပမှာပဲ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာ ရှာလေ့ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ ဘုရားက မိမိကိုယ်ကိုပဲ အားကိုးတယ်။ ပြင်ပ ဘယ်သူ့ ကိုမှ အားမကိုးဘူး။ အဲဒီတော့ အင်မတန် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာ ရင့်ကျက်တဲ့ သူမှသာလျှင် အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားလို့ ရတယ်။ အဲဒီ အလုပ်ကို လုပ်လို့ ရတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမကိုးချင်ဘူး။ အားကိုးရာကိုပဲ ရှာနေတယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုများ အားကိုးရမလဲ။ ကယ်တင်ရှင်၊ တန်ခိုးရှင်၊ အဲဒီလို လိုက်ရှာနေတာနော်။ အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားက ကယ်တင်ရှင်၊ တန်ခိုးရှင် ကိုးကွယ်တဲ့တရား မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မြတ်စွားဘုရားတောင်မှ “တရားကိုသိမှ ဘုရားကိုသိမယ်” “တရားကိုမြင်မှ ဘုရားကို မြင်မယ်” “မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တော်တောင်မှာ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ရဲ့ ကိန်းဝပ်ရာသာ ဖြစ်တယ်နော်”
ဧည့်ခန်းထဲတွင် သူနှင့်ကျွန်တော် တရားအတူတူနာနေရင်းမှ သူ့ ကို အ့ကဲခတ်နေရသည်။ သူစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိလျှင် ကျွန်တော် ကက်ဆက်ကို သွားပိတ်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးသည်။ သို့ သော် သူ စိတ်ဝင်တစားရှိနေသဖြင့် ကျွန်တော် ဆက်၍ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဆရာတော်၏ တရားသံကို ဆက်လက်ကြားနေရဆဲပင် –“ဒီစာအုပ်ကို ရေးလိုက်တဲ့ တပည့် သူ့ ဘ၀သူ့ အခြေအနေက သူက အသက်လေးဆယ်ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ သူ့ မှာ ကုလို့ မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ ရောဂါတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်နော်၊ အဲဒါကတော့ သေချာတယ်။ ဒီရောဂါ ဘယ်လိုမှ မပျောက်နိုင်တော့ဘူး၊ ဆရာဝန်တွေကလည်း နှစ်အပိုင်းအခြား၊ ခန့် မှန်းပြီးတော့ ဘယ်လောက်အထိအောင်နေရမလဲပြောတယ်။ အခု သူ ဆရာဝန်တွေ ခန့် မှန်းထားတာထက် နှစ်တော်တော်ကျော်သွားပြိး အသက်ရှည်ခဲ့တာနော်”သည်နေရာအရောက်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပိုမို စိတ်ဝင်စားဟန်ပြလာသည်။ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေသော ပုံစံကိုပြင်သည်။ ပိုမိုစူးစူးစိုက်စိုက် နားစွင့်နေပြန်သည်။
“ဆရာဝန်တွေ ခန့် မှန်းထာက လေးငါးနှစ်လောက်ပဲ နေရတော့မယ်။ ခန့် မှန်းတာကိုး။ ဒီစာအုပ်ကို ကြည့်တော့ ခုနှစ်က ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ သူ မကျန်းမမာဖြစ်နေတာက ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက၊ ကြာပြီ။ ဆရာဝန်တွေဟောတာထက် သူက အသက်ပိုရှည်နေတယ်။ အံ့သြစရာပဲ။ သူက ဘယ်လောက်ထိအောင် ယုံကြည်သလဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်းသာ တရားကို ဆက်ပြီး အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင် သူသက်တမ်းစေ့ နေနိုင်လောက်တယ်တဲ့၊ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့ငါတော့ သေတော့မယ်လို့သူ မယုံကြည်ဘူးတဲ့။ သူ့ ဟာသူ အခုနေခဲ့တာနဲ့ ပဲ ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတာ သူတွေ့ လာပြီပဲ။ သို့ သော်လည်းပဲ ငါမသေတော့ဘူးဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့နေတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ငါမသေနိုင်သေးဘူးလို့ ပဲ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နော်။ တရားကိုလည်း နေ့ တိုင်း အားထုတ်သွားတယ်။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေလည်း အကုန်လုံး လုပ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ သေမယ်လို့ တွေးပြီးတော့ စိတ်ညစ်ပြီးတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ တရားရေးတွေကို မလုပ်ဘဲနေရင်လည်း ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ သေမှာကို တွေးပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ သေမှာကို တွေးပြီးတော့ အချိန်ရှိတဲ့အခိုက် အဲဒီအချိန်ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချသွားလိုက်ပါ။ သူကိုယ်တိုင် အဲဒါ လုပ်တယ်။”
သူလက်ကာပြရင်းမှ “ရပြီ သူငယ်ချင်း၊ ငါသဘောပေါက်ပြီ” ဟု ဆိုလာသည်။ တချိန်လုံး တိတ်ဆိတ်နေသော သူ့ ထံမှ အသံထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်
“ကျေးဇူးပဲကွာ၊ သူငယ်ချင်း မင်းဆီလာတာ အားဆေးတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရသလိုပဲ၊ ဒီစာအုပ်ကို ငါသေသေချာချာ ဖတ်မယ်။ ဒီတိတ်ခွေကို ငါသေသေချာချာ နားထောင်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီထဲက ဆရာတော်ဟောထားတဲ့လူလို ငါဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ လောကမှာ တစ်ခုလုပ်လို့ မရတော့ရင် နောက်ထပ် လုပ်စရာ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ငါသဘောပေါက်ပြီကွာ”သူ့ အသံသည် လှိုဏ်သံပါ၍ အားကောင်းနေသည်။ ဟိုစဉ်တစ်ခါတုန်းကတည်းက အသံမျိုးမဟုတ်တော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ စိတ်ကို တည့်လာအောင် အားကောင်းလာအောင် လုပ်ပေးရကျိုးနပ်ပေတော့မည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်၍ ထွက်သွားသည်။ သူ့ ခြေလှမ်းများသည် လာတုန်းကလို မဟုတ်တော့၊ အတော်အတန် သွက်လက်သွားပေပြီ။
သည်တိပ်ခွေကို နားထောင်ရင်း တရားနာကြားခဲ့စဉ်က ကျွန်တော် သတိထားမိခဲ့သော စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကို ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် သူ့ အိမ်မှာ နားထောင်ရင်းမှ အထပ်ထပ် အခါခါ ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းနေမိပါတော့သည်။“I know that I would like to die with full elarity of mind. This feeling is very important.”သေတဲ့အချိန်မှာ မတွေမဝေ၊ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြည့်ပြည့်၀၀ သိနေတဲ့စိတ်နဲ့ သေချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သေသေချာချာ သိပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။သေခါနီးမှာ သတိကောင်းကောင်းနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်တာ စိတ်မှာဖြစ်တာကို ရှုသိပြီး သေရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သေခါနီးမှာ သတိကောင်းဖို့ ဆိုတာက မသေခင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားမှ ဖြစ်နိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း အတတ်နိုင်ဆုံး သတိကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင် သိနိုင်အောင်ကို သိနေတဲ့ အကျင့်ကိုလုပ်ထားရမယ်။ ဒါဟာ မသေခင်မှာ အကောင်းဆုံးနေနည်းဖြစ်ပြီး သေခါနီးမှာ အကောင်းဆုံး သေနည်းဖြစ်ပါတယ်။သေခါနီးမှာ သတိကို အားကိုးရမယ်။ သတိရှိမှ ခန္ဓာမှာ ဖြစ်ပျက်တာကို သိနိုင်မယ်။ အနတ္တကိုသိရင်းနဲ့သေရတာ ကောင်းတယ်။ အတ္တစွဲနဲ့ သေရတာ ဆင်းရဲတယ်။ အမြဲတမ်း အနတ္တကို ဥာဏ်မှာ မြင်နေအောင် နှလုံးသွင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိအောင် ကြိုးစားပါ။
(စာရေးသူ – မြသန်းစံ)
တဈလောကပငျ သူနှငျ့ ကြှနျတျောဆုံတှေ့ ခဲ့သေးသညျ။ သညျတုနျးက သူသညျ ပြျောပြျောရှငျရှငျ၊ တကျတကျကွှကွှ၊ သူ့ မှာ ညှိုးငယျနသေညျ့ သဏ်ဍာနျ အလဉျြးမရှိ၊ သူ့ သူငယျခငျြးတှနှေငျ့ ပွနျဆုံသညျ့ အထိမျးအမှတျ ယမကာဝိုငျးသို့ကြှနျတျောတကျခဲ့ရသေးသညျ။ ကြှနျတျော့ရှေ့ ဖနျခှကျထဲမှ အခြိုရညျတှကေို ကွညျ့ကာ သူကပငျ ရယျပှဲဖှဲ့ လိုကျသေးသညျ။
“ဟား-ဟား၊ ငါ့သူငယျခငျြးကွီး ပွောငျးလဲသှားတာကတော့ မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲ”သူက အရကျခှကျကို မော့ခရြငျးမှ ကြှနျတျော့ကို ပွောနသေညျ။ ကြှနျတော့မှာ သူတို့ ကွားထဲတှငျ သငျးကှဲငှကျ တဈကောငျလို ဖွဈနသေညျ။ ကွာတော့ သူ အားနာလာပုံရသညျ။ ကြှနျတျော တညျးခိုရာ နရောအရောကျ သူအသံတှေ လေးတှဲ့ နလေပွေီ။
“ငါတို့ဝိုငျးထဲမှာ မငျးတဈယောကျတညျး အခြိုရညျသမားဖွဈနတေော့ မငျးအနရေခကျနမှောပဲ၊ ငါ့တော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဆကျဆှဲလိုကျဦးမယျကှာ၊ ကြောငျးပွီးကတညျးက မဆုံဖွဈတော့တာ၊ အခုဆုံတုနျးလေး လုပျလိုကျဦးမယျ”ကြှနျတျောက အလိုကျသငျ့နပေေးသျောလညျး သူတို့ အနဖွေငျ့ ကြှနျတျော့အပျေါ ဆကျဆံရခကျနပေုံရသညျ။ ကြှနျတျော့အပျေါ ပွောစရာစကားလညျးမရှိ။ ကြှနျတျောကလညျး သူတို့ အပျေါ ပွနျပွောစရာအကွောငျးလညျး မရှိလှပေ။ သူတို့ ၏ ရှေးဟောငျးနှောငျးဖွဈကိစ်စမြားတှငျ ကြှနျတျောကလညျး ပါဝငျပတျသကျခွငျးမရှိခဲ့။ သညျတော့ ကြှနျတျော့မှာ လူပိုလို ဖွဈနသေညျ။ သို့ နှငျ့ ကြှနျတျော့ကို သူတို့ ပွနျပို့ ကွခွငျးဖွဈသညျ။ သညျတုနျးက ရှငျမွူးတကျကွှနသေော သူ့ ပုံသဏ်ဍာနျသညျ ကြှနျတျော့မကျြစိထဲ စှဲထငျကနျြရဈခဲ့သညျ။
တဈလလောကျကွာတော့ သူ့ အသံကို တယျလီဖုနျးခှကျထဲမှတဈဆငျ့ ကွားလိုကျရသညျ။ ဖုနျးခှကျထဲတှငျ သူ့ အသံတှေ မှိနျဖြော့နသေညျကို ကြှနျတျော သတိထားမိသညျ။ ထိုအသံမှတဈဆငျ့ ဖုနျးပွောနသေညျ့ သူ့ ရုပျသှငျကို မှနျးဆပုံဖျောကွညျ့မိသညျ။ ဘယျလောကျမြား ညှိုးလြော့နမေညျလဲ။ သူ့ အသံခွောကျကပျကပျကွီးတှငျ လှိုငျးအနိမျ့အမွငျ့ မရှိတော့။ တကယျ့ တနျးတနျးကွီး၊ သူ့ အသံက အေးစကျသျောလညျး သူ့ ရငျထဲတှငျ အဘယျမြှ ပူလောငျပွငျးထနျနမေညျကို ကြှနျတျော ရိပျမိနသေညျ။ သူ့ စိတျတှကေော ဘယျလောကျဗွောငျးဆနျ နသေလဲမသိ။ သူ့ အပူသညျ တယျလီဖုနျးကွိုးမြားမှတဈဆငျ့ ကြှနျတျော့ထံ ကူးစကျလာသညျဟုပငျ ထငျရသညျ။ ဟိုတုနျးက ရှငျမွူးတကျကွှ လနျးဆနျးနသေော အသံမြိုးနှငျ့ ကှားခွားလှပါဘိခွငျး။ဌာနတှငျး တဈဆငျ့မွငျ့ရာထူးအတှကျ သူ့ ဆေးစဈခံရငျး ကု၍မရသော ရောဂါပိုးတဈခုကို သူ့ သှေးထဲမှာ စဈဆေးတှေ့ ရှိသှားသညျ။
ကြှမျးကငျြသူမြားဖွငျ့ နောကျတဈခါ စဈဆေးပွနျသညျ။ အဖွမေပွောငျးလဲ၊ သူတုနျလှုပျသှားသညျ။ သညျရောဂါပိုးသညျ ဘယျတုနျးကမြား သူ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ နရောယူသှားသညျမသိ။ သူအလုပျမှ ရုတျတရကျ အနားယူလိုကျရသညျ။ မောငျးနှငျနသေညျ့ စကျတဈလုံး လညျပတျကောငျးနစေဉျမှာ ခါးပတျကွိုးပွတျသှားသညျသို့ဖွုနျးခနဲ။မမြှျောလငျ့ထားသော အခွအေနတေဈခု ရုတျတရကျရလာသူတိုငျး ကွောငျစီစီ ဖွဈသှားတတျတာအမှနျပငျ။ လကျရှိလညျပတျနသေော အရှိနျအဟုနျနှငျ့ အကွာကွီးနရေမညျဟု ထငျထားတတျကွတာကလညျး ဓမ်မတာမဟုတျလား။ အခွအေနသေဈတဈခုသို့ရုတျခညျြးပွောငျးလိုကျရသောအခါ ထိုအခွအေနသေဈအတှကျ ကိုယျ့ဘဝထဲမှာ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ဘာမှ ပွငျဆငျထားတာမရှိ၊ ထိုအခါ ပွငျဆငျထားမှုမရှိခွငျး၏ အခွအေနကေို ဒဏျရာဒဏျခကျြအဖွဈ ပွငျးထနျစှာခံစားရစမွဲ။ ကြှနျတျော့ သူငယျခငျြးလညျး သညျလိုဖွဈသှားပုံရသညျ။ သူ့ အသံကို ခနျ့ မှနျးကွညျ့ရုံနှငျ့ ဆောကျတညျရာမရဖွဈနသေော သူ့ စိတျတှကေို ကြှနျတျော အထငျးသားမွငျနရေသညျ။ ကြှနျတျော သူ့ ကို အားပေးရသညျ။
ဘာမှ စိတျမပကျြပါနဲ့သူငယျခငျြးရာ၊ ငါတို့ ရှိပါသေးတယျ။ မငျးကို ငါလိုလသေေးမရှိ ကူညီပါ့မယျ။ စိတျအးအေးသာထား” “စိတျအေးအေးထားဖို့ ဆိုတာက အပွောလှယျသလောကျ အလုပျခကျတယျကှ၊ အခု ငါ့စိတျကို ဘယျလိုအေးအောငျ လုပျရမလဲ၊ အဲဒါကို ငါသိခငျြတယျ” “ဒီလိုဆိုရငျ ဖုနျးထဲမှာပွောဖို့ က သိပျအဆငျပွမှောမဟုတျဘူး။ မငျးအားရငျ လာခဲ့ပါလား။ ဒါမြိုးက အခြိနျယူပွီး သခြောပွောမှ နားလညျမှာ မငျးလာနိုငျမလား” “အေ-လာခဲ့မယျကှာ၊ ငါတော့ အခုစိတျအေးတဲ့နညျးကလှဲလို့တခွားဘာမှ မသိခငျြဘူး။ ကဲ-ငါအခုလာခဲ့မယျ။ မငျဆကျစောငျ့နေ” သူ့ ဘကျက ဖုနျးခသြှားသညျ။ စိတျမွနျကိုယျမွနျကွီးဖွဈသညျ။ သွျော-သူ့ ခမြာ အရိပျတဈခုခုကို ရှာနရေသညျကိုး။ သူ့ စိတျငွိမျးခမျြးဖို့ခိုလှုံစရာအရိပျတဈခုရနိုငျဖို့သူသဘောပေါကျနားလညျသညျအထိ ကြှနျတျောရှငျးပွရပမေညျ။ သူ ကြှနျတျော့ထံသို့ကားဖွငျ့လာနစေဉျအတှငျး ကြှနျတျော့မှာ သူ့ ကို ပွောရမညျ့ စကားတှကေို ရှာဖှစေုဆောငျးရသညျ။ စာအုပျစငျမှ စာအုပျတှကေို ရှာရသညျ။ တိတျခှစေငျမှ တရားတိတျခှမြေားကို ရှေးခယျြရသညျ။ လတျတလော သူနှငျ့အကိုကျညီဆုံးဖွဈမညျ့ တရားစာအုပျ တရားတိပျခှေ။
ကြှနျတျောက ဆရာတျောဦးဇောတိက (ပဉျြးမနား)၏ တရားတိတျခှတှေနှေငျ့ အမွဲတစေ ထိတှေ့ ယဉျပါးနသေူဖွဈသဖွငျ့ ဘယျလို စိတျအခွအေနဖွေဈနသေညျ့ ပုဂ်ဂိုလျဆိုလြှငျ ဘယျတိပျခှထေဲက ဘယျဟောခကျြနှငျ့ အံဝငျမညျကိုပါ ခနျ့ မှနျးတတျလာခဲ့သညျ။ သို့ နှငျ့ အခြိနျမဆိုငျးဘဲ အဖွရေသညျ။ “နကုလမာတာကို ဘုရားဟောဖူးတာရှိတယျ။ တဈခဏလောကျမြား ကိုယျ့ကိုယျကို ကနျြးမာတယျလို့ ပွောတဲလူဟာ အသိဉာဏျနညျးလို့ပွောတာပါတဲ့။ ဒီခန်ဓာကိုယျဆိုတာ အစဉျ အမွဲပဲ သူ့ မှာ ဒုက်ခဝဒေနာတှေ ရှိနတောပဲနျော၊ သှားလာလုပျကိုငျလို့ဖွဈနသေေးလို့ တာ သူ့ ကို ရောဂါလို့ လဲ နာမညျ တပျမနတေော့ဘူး။ ဆေးရုံလညျးတကျစရာမလိုဘူး။ ဆရာဝနျလညျးပွစရာ မလိုဘူး။ ဒါပမေယျ့ မအီမသာဖွဈတဲ့သဘောတှဟော ခန်ဓာကိုယျမှာ အမွဲတမျးရှိနတေယျ။ ရငျထဲကပူသလိုလို မောသလိုလို တဈခါတလေ ခေါငျးထဲကမူးသလိုလို၊ ဒီလိုဟာတှဟော အနညျးနဲ့ အမြား လူတိုငျးမှာရှိနတေယျ။ ငယျရှယျတဲ့ လူတှကေ ဒီလောကျ မသိသေးဘူး။
စိတျတှကေ တကျကွှတဲ့လူတှဆေိုတော့ ခန်ဓာကိုယျကလညျး လှုပျရှားရတဲ့အရှယျ၊ Active ဖွဈတဲ့အရှယျဆိုတော့ သတိမပွုမိလိုပါ။ လုပျစရာ ကိုငျစရာတှေ မြားနတေယျ။ ကိုယျလုပျခငျြ ကိုငျခငျြတာတှကေိုပဲ သိပျအာရုံစိုကျပွီးတော့ စိတျဝငျစားပွီးတော့ Involve ဖွဈပွီးတော့ လုပျနရေတာဆိုတော့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ မအီမသာမှုတှကေို သိပျပွီး အရေးမစိုကျနိုငျကွဘူး။ မှေးခါစကတညျးက မအီမသာတဲ့သဘောက ရှိနသေေးသားပဲ။ ဒီမအီမသာဆိုတဲ့သဘော၊ မသကျမသာဆိုတဲ့သဘောကိုပဲ Disease လို့ချေါတာပါ။ ရောဂါအမညျ မတပျသေးလို့ သာ။ ဒီခန်ဓာကိုယျထဲက မအီမသာသဘောကို အမွဲတမျးလိုလိုပဲ ပွုပွငျပွောငျးလဲပေးနလေို့ သာ နညျးနညျးလေး နသောတာပါ”
ထိုစကားအပျေါ အခွခေံ၍ သူ့ ကို ကြှနျတျော အားပေးရပမေညျ။ သူက ရောဂါတဈခုရှိပွီဟု ဆိုငျးဘုတျအတပျခံလိုကျရသူ။ ကြှနျတျောတို့ က ဆိုငျးဘုတျမရှိသေးသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျတှပေဲဟု ဆိုကွပါစို့ ။ ဆိုငျးဘုတျအတပျမခံရသေးသညျ့ ကြှနျတျောတို့ တှငျလညျး ရောဂါဝဒေနာပေါငျးစုံ ပိုးမှားပေါငျးစုံတို့ သညျ ခန်ဓာကိုယျထဲ နရောအနှံ့ ရှိနပေလေိမျ့မညျ။ သူ့ ထကျလညျး ဆိုးလြှငျ ဆိုးသှားနိုငျသညျ။ ဘာမှ မသခြော။
သို့ သျော သူ့ ဆိုငျးဘုတျက ခတျေပျေါဆိုငျးဘုတျ။ တနညျးအားဖွငျ့ ကုစရာဆေးမရှိသေးသညျ့ ရောဂါဟုဆိုသညျ့အတှကျ ထိုအရှိနျကွောငျ့ လူတှေ ကွောကျနကွေခွငျးပါပေ။ သို့ သျော ကုစရာဆေးရှိသညျ့ ရောဂါမြားနှငျ့ပငျ ကှယျလှနျသူတို့ လညျး ရှိခဲ့ကွပွီးပပွေီ။ အသအေခြာ ဂရုတစိုကျကုစားလကျြကပငျ တိမျးပါးခဲ့သူတှလေညျး ရှိခဲ့ကွပွီးပွီ။ လူတို့ ၏ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှ ရောဂါဘယတှကေို ကုစားပေးရငျး အသကျကယျနကွေသညျ့ ဆရာဝနျတှပေငျလြှငျ ထိုရောဂါဘယတှေ သူတို့ခန်ဓာထဲ နရောယူလာသောအခါ သူတို့ အသကျကို သူတို့မကယျနိုငျကွတော့။ ဘာမြှမမွဲ၊ ဘာမြှအစိုးမရ၊ သူ့ သဘောသူဆောငျလာသညျ့ သခွေငျးတရား၊ မရငျဆိုငျလိုသျောလညျး ရငျဆိုငျရပမေညျ။
ရုတျတရကျဆိုလြှငျ ကြှနျတျော့သူငယျခငျြးသညျ သမေိနျ့ ကပြွီးသူဟု ထငျရပမေညျ။ သဖေို့ ရကျ အတိအကြ သတျမှတျခံလိုကျရသူကဲ့သို့ရှိပမေညျ။ ခနျ့ မှနျးခွအေရ သညျရောဂါကွောငျ့ သညျနှဈအပိုငျးအခွားအတှငျးမှာ သရေတော့မညျဆိုလြှငျ မသမေီ ဘာလုပျမညျနညျး။ ရသညျ့အခြိနျအတှငျး ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အခြိနျတှကေို ဘယျလို အကြိုးရှိအောငျ အသုံးခသြှားမညျနညျး။
“အဆိုးတှကေို ထိုငျတှေးပွီး စိတျဓာတျကနြရေငျ စိတျဓာတျ အငျအားတှကေုနျမယျ။ ခန်ဓာကိုယျအငျအားတှကေုနျမယျ။ မလုပျခငျြ မကိုငျခငျြဖွဈပွီး ညှိုးနှမျးနမေယျ။ အဲဒီလို စိတျဓာတျကနြတေဲ့ သူနဲ့ တှေ့ ရရငျ တခွားလူတှပေါ စိတျဓာတျကတြတျတယျ။ တတျနိုငျသလောကျ အကောငျးဘကျကနေ ကွညျ့ပွီးတော့ လုပျနိုငျသလောကျလုပျနရေငျ ကိုယျ့အတှကျလညျး အကြိုးရှိတယျ။ သူမြားအတှကျလညျး အကြိုးရှိတယျ။ တရားအားထုတျတဲ့သူ ကိုယျ့စိတျကို ကိုယျကောငျးကောငျးသိတဲ့သူဟာ စိတျဓာတျကခြဲတယျ။ အဆိုးနဲ့ တှေ့ ရလညျး အဆိုးထဲက အကောငျးကိုရအောငျ ယူတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမွဲသတိနဲ့နတေဲ့အကငျြ့ကို လုပျနမှောသာ ဘဝအတှေ့ အကွုံအမြိုးမြိုး ကောငျးအဆိုးအမြိုးမြိုး တှေ့ ရတဲ့အခါ ခံနိုငျရညျရှိမယျ။ အကောငျးနဲ့ တှေ့ တဲ့အခါ ငါမှငါဆိုတဲ့ မာနဖွဈမသှားဘူး။ အဆိုးနဲ့ တှေ့ ရတဲ့အခါ စိတျဓာတျကြ မသှားရဘူး။ ဘယျလို လောကဓံနဲ့ တှေ့ ရတှေ့ ရ အားလုံးဟာ ရငျ့ကကျြမှုကို အထောကျအကူပွုမယျ”
ကြှနျတျောက ကြှနျတျော့သူငယျခငျြးကို အားပေးရနျ တရားစကားတှေ ရှာဖှစေုဆောငျးနဆေဲမှာပငျ ကြှနျတျော့ သူငယျခငျြးကားက အိမျရှေ့ မှာ ဆိုကျလာသညျ။ သူ့ ကို ဆရာတျောဦးဇောတိက ဟောကွားသညျ့ ဗုဒ်ဓ၏ရငျခှငျမှာ တရား တိပျခှမှေ အကွောငျးအရာမြားကို ဖောကျသညျခရြပါမညျ။သူနှငျ့ ကြှနျတျော စကားတှေ အမြားကွီး ပွောရပလေိမျ့ဦးမညျ။“လာသူငယျခငျြးလာ” အိမျပျေါသို့တကျလာသော သူ့ ကို လှမျးကွိုလိုကျရသညျ။ သူမကျြနှာမကောငျး၊ ခွလှေမျးတှကေ တုံ့ နှေးနှေး၊ ဘိနပျခြှတျနပေုံက ဆုတျဆိုငျးဆိုငျး။ ခါတိုငျးဆိုလြှငျ “ဟေ့ သူငယျခငျြးကွီး ဘယျလိုလဲကှာ ဘာညာ” ဟု ဆိုကာ ဝုနျးဒိုငျး ဘိနပျခြှတျ၊ ကမနျးကတနျး အခနျးထဲဝငျလာတတျသော သူ့ လှုပျရှားမှုတှသေညျ ယခုတော့…။
ဧညျ့ခနျးတှငျး ကုလားထိုငျပျေါ ထိုငျလိုကျပုံကလညျး အရုပျကွိုးပွတျ။ “ဟူး” ကနဲ မှုတျထုတျလိုကျသော သကျပွငျးကလညျး ရှညျလြားလှပါဘိ။ သူ့ ခမြာ ကြှနျတျော့ကိုလညျး မကျြနှာခငျြး မဆိုငျနိုငျပွနျ။ ပွူးတငျးပေါကျမှနေ၍ ခပျဝေးဝေးတဈနရောကို ကွညျ့နသေညျ့ သူ့ မကျြလုံးတှငျ မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့နသေော အတှေးတှေ ထငျဟပျနသေညျဟု ကြှနျတျောထငျသညျ။ ကြှနျတျောကပငျ စကားစရသညျ။
“ရုတျတရကျဆိုတော့ မငျးဘယျလောကျ ခံစားရမလဲဆိုတာ ငါကိုယျခငျြးစာပါတယျ သူငယျခငျြး။ တကယျတော့ ငါ့အနနေဲ့ က အားပေးရုံ နညျးလမျး ပွောပွရုံဆိုတော့ ကာယကံရှငျ မငျးလောကျတော့ မခံစားရဘူးလို့မငျးပွောမယျဆိုရငျလညျး ငါခံရမှာပါပဲ။ ဟုတျတယျ မငျးက ကာယကံရှငျကိုး။ ငါက ဘေးလူဆိုတော့ ကိုယျခငျြးစာရုံကလှဲလို့ကာယကံရှငျလောကျတော့ ခံစားခကျြ မပွငျးနိုငျဘူးပေါ့ကှာ”သူဘာမြှ မပွော။ ငွိမျနသေညျ။ အဝေးတဈနရောကို ကွညျ့နသေညျ။ သူ့ မကျြလုံးတှငျ ဘာကိုမြှ မမွငျမှာတော့ သခြောသညျ။ သူ့ စိတျက ကြှနျတျော့စကားကို နားထောငျနပေလေိမျ့မညျ။ သို့ အတှကျ မကျြလုံးကိုဖှငျ့၍ ကွညျ့နသေျောလညျး ဘာကိုကွညျ့နမေိမှနျးသိမှာ မဟုတျသဖွငျ့ သူ့ ခမြာ မွငျနသေျောလညျး သိမညျ မဟုတျပေ။ ကြှနျတျောက လကျထဲတှငျ ကိုငျထားသော ဓမ်မဒါန စာအုပျငယျကလေးကို သူ့ ထံ လှမျးပေးလိုကျသညျ။ ဆရာ ဦးဇောတိက (ပဉျြးမနား) ဟောကွားခကျြကို ပွနျလညျ ပုံနှိပျထားသညျ့ ဓမ်မဒါနစာအုပျကလေး။ (In the lap of the Buddha) ဗုဒ်ဓ၏ ရငျခှငျမှာ။
သူက စာအုပျကလေးကို လေးလံလှသော သူ့ လကျမြားဖွငျ့ လှမျးယူနသေညျ။“ဒီစာအုပျကလေးကတော့ အိမျရောကျရငျ မငျးအေးအေး ဆေးဆေးဖတျပေါ့ကှာ၊ ဒါက တရားတိပျခှေ၊ ဒီထဲမှာကတော့ ဆရာတျောဟောပွောခကျြ အပွညျ့အစုံပါတယျ။ စာအုပျကတော့ နညျးနညျးခြုံ့ ထားတာပေါ့”ကြှနျတျောတျောက ကတျဆကျထားရာနရောသို့လြှောကျသှားပွီး တိပျခှကေို အစမျးသဘောဖှငျ့ပွလိုကျသညျ။ ယခုအခြိနျတှငျ ကြှနျတျောက သူ့ ကို ပွောပွနခွေငျးထကျ ဆရာတျော၏ အသံက သူ့ အတှကျ စိတျအေးသကျသာရာရမှုကို ပိုဖွဈစမေညျဟု ယုံကွညျသညျ။ ဆရာတျော၏ အေးမွသော အသံသညျ အိမျအတှငျး၌ ဖွနျ့ ကကျြလှမျးမိုးသှားတော့သညျ။“မဟာပရိနိဗ်ဗာနသုတျမှာ ပါဠိလိုဟောခဲ့တဲ့ ဂါထာလေးတဈပုဒျကို ဒီမှာ အင်ျဂလိပျလို ဘာသာပွနျထားတယျ။ အဓိပ်ပါယျကလေးက အငျမတနျရှငျးပါတယျ။ အငျမတနျရိုးပါတယျ Be an island unto yourself.
ပငျလယျ သမယဒ်ဒရာ အလယျခေါငျမှာ ကြှနျးလေးရှိတယျ။
ပငျလယျ သမုဒ်ဒရာမှာလညျး မုနျတိုငျးတှထေ၊ လှိုငျးကွီးတှထေ နတေယျ။ အဲဒီမှာ လူတဈယောကျကလညျး မြောနတေယျ ဆိုပါတော့၊ ကြှနျးကလေးတဈကြှနျးမွငျရငျ သူဘယျ့နှယျနမေလဲ၊ အငျမတနျ ဝမျးသာမယျ၊ ဒီကြှနျးကိုသာ ငါရောကျသှားရငျတော့ ငါဒီဒုက်ခကနေ လှတျကငျးပွီ၊ အားကိုးရာ အားထားရာရပွီ။ ဆောကျတညျရာရပွီ။ အဲဒီလိုဖွဈမှာနျော၊ မိမိကိုယျကိုလဲ အဲဒီ လှိုငျးတံပိုးတှထေနတေဲ့ ပငျလယျ သမုဒ်ဒရာထဲက ကြှနျးကလေး တဈကြှနျးသဖှယျဖွဈအောငျလုပျပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို လုပျယူရမှာနျော။ အလိုအလြောကျတော့ ဖွဈမလာဘူး။ Be your own refuge…refuge ဆိုတာ အားကိုးရာ အားထားရာဖွဈအောငျလုပျပါတဲ့။ ပွီးတော့ Make the Dhamma your island တရားကို မိမိအတှကျ ဆောကျတညျရာဖွဈတဲ့ ကြှနျးကလေးသဖှယျ ဖွဈအောငျလုပျပါ။ Make no other refuge တခွား ဘယျအရာကိုမှ မိမိအတှကျ ကိုးကှယျရာ အားထားရာ မဖွဈအောငျလုပျပါ။
ဒီစကားတှဟော အငျမတနျ လေးနကျတယျနျော။ လူဆိုတာ ပွငျပမှာပဲ ကိုးကှယျရာ အားထားရာကွတာ။ အဲဒီလို ဖွဈအောငျ မလုပျနဲ့ ။ ဒီစကားတှဟော အငျမတနျလေးနကျတယျနျော။ လူဆိုတာ ပွငျပမှာပဲ ကိုးကှယျရာ အားထားရာ ရှာလရှေိ့တယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာတရားမှာ ဘုရားက မိမိကိုယျကိုပဲ အားကိုးတယျ။ ပွငျပ ဘယျသူ့ ကိုမှ အားမကိုးဘူး။ အဲဒီတော့ အငျမတနျ စိတျဓာတျ ခိုငျမာ ရငျ့ကကျြတဲ့ သူမှသာလြှငျ အဲဒီစိတျဓာတျမြိုးထားလို့ ရတယျ။ အဲဒီ အလုပျကို လုပျလို့ ရတယျ။ စိတျဓာတျပြော့ညံ့တဲ့သူဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို အားမကိုးခငျြဘူး။ အားကိုးရာကိုပဲ ရှာနတေယျ။ ဘယျသူ့ ကိုမြား အားကိုးရမလဲ။ ကယျတငျရှငျ၊ တနျခိုးရှငျ၊ အဲဒီလို လိုကျရှာနတောနျော။ အဲဒီတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာတရားက ကယျတငျရှငျ၊ တနျခိုးရှငျ ကိုးကှယျတဲ့တရား မဟုတျဘူး။ တကယျပွောမယျဆိုရငျ ပုဂ်ဂိုလျကို ကိုးကှယျတဲ့တရားမဟုတျဘူး။ ဒါကွောငျ့ မွတျစှားဘုရားတောငျမှ “တရားကိုသိမှ ဘုရားကိုသိမယျ” “တရားကိုမွငျမှ ဘုရားကို မွငျမယျ” “မွတျစှာဘုရားရဲ့ ခန်ဓာကိုယျတျောတောငျမှာ သဗ်ဗညုတ ဉာဏျတျောရဲ့ ကိနျးဝပျရာသာ ဖွဈတယျနျော”
ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ သူနှငျ့ကြှနျတျော တရားအတူတူနာနရေငျးမှ သူ့ ကို အ့ကဲခတျနရေသညျ။ သူစိတျဝငျစားဟနျမရှိလြှငျ ကြှနျတျော ကကျဆကျကို သှားပိတျလိုကျမယျလို့စိတျကူးသညျ။ သို့ သျော သူ စိတျဝငျတစားရှိနသေဖွငျ့ ကြှနျတျော ဆကျ၍ ငွိမျနလေိုကျသညျ။ ဆရာတျော၏ တရားသံကို ဆကျလကျကွားနရေဆဲပငျ –“ဒီစာအုပျကို ရေးလိုကျတဲ့ တပညျ့ သူ့ ဘဝသူ့ အခွအေနကေ သူက အသကျလေးဆယျငါးနှဈလောကျရှိပွီ။ သူ့ မှာ ကုလို့ မပြောကျနိုငျတော့တဲ့ ရောဂါတဈခုလညျး ဖွဈတယျနျော၊ အဲဒါကတော့ သခြောတယျ။ ဒီရောဂါ ဘယျလိုမှ မပြောကျနိုငျတော့ဘူး၊ ဆရာဝနျတှကေလညျး နှဈအပိုငျးအခွား၊ ခနျ့ မှနျးပွီးတော့ ဘယျလောကျအထိအောငျနရေမလဲပွောတယျ။ အခု သူ ဆရာဝနျတှေ ခနျ့ မှနျးထားတာထကျ နှဈတျောတျောကြျောသှားပွိး အသကျရှညျခဲ့တာနျော”သညျနရောအရောကျတှငျ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ပိုမို စိတျဝငျစားဟနျပွလာသညျ။ ကုလားထိုငျပျေါမှာ ထိုငျနသေော ပုံစံကိုပွငျသညျ။ ပိုမိုစူးစူးစိုကျစိုကျ နားစှငျ့နပွေနျသညျ။
“ဆရာဝနျတှေ ခနျ့ မှနျးထာက လေးငါးနှဈလောကျပဲ နရေတော့မယျ။ ခနျ့ မှနျးတာကိုး။ ဒီစာအုပျကို ကွညျ့တော့ ခုနှဈက ၁၉၉၄ ခုနှဈ၊ သူ မကနျြးမမာဖွဈနတောက ၁၉၈၁ ခုနှဈကတညျးက၊ ကွာပွီ။ ဆရာဝနျတှဟေောတာထကျ သူက အသကျပိုရှညျနတေယျ။ အံ့သွစရာပဲ။ သူက ဘယျလောကျထိအောငျ ယုံကွညျသလဲဆိုတော့ ဒီအတိုငျးသာ တရားကို ဆကျပွီး အားထုတျသှားမယျဆိုရငျ သူသကျတမျးစေ့ နနေိုငျလောကျတယျတဲ့၊ ရောဂါတဈခုဖွဈလာတာနဲ့ငါတော့ သတေော့မယျလို့သူ မယုံကွညျဘူးတဲ့။ သူ့ ဟာသူ အခုနခေဲ့တာနဲ့ ပဲ ဆရာဝနျပွောတဲ့အတိုငျး ဖွဈမလာတော့ဘူးဆိုတာ သူတှေ့ လာပွီပဲ။ သို့ သျောလညျးပဲ ငါမသတေော့ဘူးဆိုပွီး ပေါ့ပေါ့နတောလားဆိုတော့ မဟုတျဘူးနျော။ ငါမသနေိုငျသေးဘူးလို့ ပဲ မြှျောလငျ့ခကျြရှိတယျနျော။ တရားကိုလညျး နေ့ တိုငျး အားထုတျသှားတယျ။ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတာတှလေညျး အကုနျလုံး လုပျသှားတယျ။ အဲဒီတော့ သမေယျလို့ တှေးပွီးတော့ စိတျညဈပွီးတော့ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတဲ့ စီးပှားရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ တရားရေးတှကေို မလုပျဘဲနရေငျလညျး ဘာမှ အကြိုးမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ သမှောကို တှေးပွီးတော့ စိတျဓာတျကနြဖေို့မဟုတျဘူး။ သမှောကို တှေးပွီးတော့ အခြိနျရှိတဲ့အခိုကျ အဲဒီအခြိနျကို အကောငျးဆုံးအသုံးခသြှားလိုကျပါ။ သူကိုယျတိုငျ အဲဒါ လုပျတယျ။”
သူလကျကာပွရငျးမှ “ရပွီ သူငယျခငျြး၊ ငါသဘောပေါကျပွီ” ဟု ဆိုလာသညျ။ တခြိနျလုံး တိတျဆိတျနသေော သူ့ ထံမှ အသံထှကျပျေါလာခွငျးဖွဈသညျ
ကြှနျတျောနရောမှထ၍ ကကျဆကျကို သှားပိတျလိုကျရသညျ။ ပွီးတော့ ကကျဆကျခှကေို ပွနျယူလာကာ သူ့ ကို ပေးလိုကျသညျ။ သူနရောမှပငျထ၍ သှားရနျ ပွငျဆငျနပေပွေီ။
“ကြေးဇူးပဲကှာ၊ သူငယျခငျြး မငျးဆီလာတာ အားဆေးတဈခှကျသောကျလိုကျရသလိုပဲ၊ ဒီစာအုပျကို ငါသသေခြောခြာ ဖတျမယျ။ ဒီတိတျခှကေို ငါသသေခြောခြာ နားထောငျမယျ။ ပွီးတော့ ဒီထဲက ဆရာတျောဟောထားတဲ့လူလို ငါဖွဈအောငျ ကွိုးစားမယျ။ လောကမှာ တဈခုလုပျလို့ မရတော့ရငျ နောကျထပျ လုပျစရာ အမြားကွီး ရှိနသေေးတယျဆိုတာ ငါသဘောပေါကျပွီကှာ”သူ့ အသံသညျ လှိုဏျသံပါ၍ အားကောငျးနသေညျ။ ဟိုစဉျတဈခါတုနျးကတညျးက အသံမြိုးမဟုတျတော့။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောကတော့ သူ့ စိတျကို တညျ့လာအောငျ အားကောငျးလာအောငျ လုပျပေးရကြိုးနပျပတေော့မညျ။ သူ ကြှနျတျော့ကို နှုတျဆကျ၍ ထှကျသှားသညျ။ သူ့ ခွလှေမျးမြားသညျ လာတုနျးကလို မဟုတျတော့၊ အတျောအတနျ သှကျလကျသှားပပွေီ။
သညျတိပျခှကေို နားထောငျရငျး တရားနာကွားခဲ့စဉျက ကြှနျတျော သတိထားမိခဲ့သော စာပိုဒျလေးတဈပိုဒျကို ကြှနျတျော့ သူငယျခငျြးဖွဈသူသညျ သူ့ အိမျမှာ နားထောငျရငျးမှ အထပျထပျ အခါခါ ဆငျခွငျနှလုံးသှငျးနိုငျပါစဟေု ဆုတောငျးနမေိပါတော့သညျ။“I know that I would like to die with full elarity of mind. This feeling is very important.”သတေဲ့အခြိနျမှာ မတှမေဝေ၊ ကွညျကွညျလငျလငျ ပွညျ့ပွညျ့ဝ၀ သိနတေဲ့စိတျနဲ့ သခေငျြတယျဆိုတာ ကြှနျတျော သသေခြောခြာ သိပါတယျ။ ဒါဟာ သိပျအရေးကွီးတယျလို့ခံစားရပါတယျ။သခေါနီးမှာ သတိကောငျးကောငျးနဲ့ခန်ဓာမှာဖွဈတာ စိတျမှာဖွဈတာကို ရှုသိပွီး သရေတာအကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို သခေါနီးမှာ သတိကောငျးဖို့ ဆိုတာက မသခေငျ နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက ကွိုတငျလကေ့ငျြ့ထားမှ ဖွဈနိုငျမယျ။
ဒါကွောငျ့ အမွဲတမျး အတတျနိုငျဆုံး သတိကောငျးကောငျးနဲ့ကွညျကွညျလငျလငျ သိနိုငျအောငျကို သိနတေဲ့ အကငျြ့ကိုလုပျထားရမယျ။ ဒါဟာ မသခေငျမှာ အကောငျးဆုံးနနေညျးဖွဈပွီး သခေါနီးမှာ အကောငျးဆုံး သနေညျးဖွဈပါတယျ။သခေါနီးမှာ သတိကို အားကိုးရမယျ။ သတိရှိမှ ခန်ဓာမှာ ဖွဈပကျြတာကို သိနိုငျမယျ။ အနတ်တကိုသိရငျးနဲ့သရေတာ ကောငျးတယျ။ အတ်တစှဲနဲ့ သရေတာ ဆငျးရဲတယျ။ အမွဲတမျး အနတ်တကို ဉာဏျမှာ မွငျနအေောငျ နှလုံးသှငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ရှိအောငျ ကွိုးစားပါ။
(စာရေးသူ – မွသနျးစံ)
Posted in လူမှုဘဝ, အတွေးအမြင်LeaveaComment on သေမိန့် ကျပြီးသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း